Casharka 38aad ee Kitaabka Siirada Nebiga Muhammed SCW
Markuu dhammaaday dagaalkii Badar, oo ahaa dagaalkii ugu horreeyey oo ay isaga hor yimaadeen xaqa iyo baadilka. Allaahna uu nasrigiisa siiyey dadkii muslimiinta ahaa, carab oo dhanna ay ogaatay xoogga iyo awoodda muslimiinta iyo in ay yihiin awood khatar ku ah iyaga, haddii aan laga hor teginna ay mandiqada oo dhan qabsanayaan, ayaa waxaa bilaabmay naceyb iyo cadaawad loo hayo muslimiinta. Qabiil walba oo ka mid ahaa mushrikiinta carabta iyo yahuudda wuxuu ku fekerayey sidii uu uga hortegilahaa islaamka.
Waxaa hormood u ahaa cadowtinimadaas reer Makka, oo iyagoo awalba u ciil qabay Nabiga SCW iyo asaxaabiisa, haddana dharbaaxo xumi ku soo dhacday Badar, halkaas oo ay ku waayeen madaxdoodii iyo raggoodii khatarta ahaa. Dadkii Makka ku noolaa waxaa quluubtooda buuxiyey nacayb iyo colaad ay u hayaan islaamka iyo muslimiinta. Sidoo kale saddexdii qabiilo ee yahuudda ahaa oo degganaa Madiina waxa ay la guuxayeen nacaybka islaamka, qabiil ka mid ihi nacaybkaas islaamka wuuba muujistay. Waxaa degganaa baadiyaha iyo magaalooyinkii ku hareereysnaa madiina.
Rasuulka SCW iyo asxaabtiisa waxa uu go'aankoodu ahaa in ay u beerdhigaan cid walba oo islaamka soo milicsata, waxa ayna ka hor tegi jireen cid walba oo duullaan soo abaabusha damacdana in ay muslimiinta dhib u geysato. Rasuulkuna SCW markuu maqlo qolo soo hub urursanaysa duullaan ayuu qaadi jirey oo meesheeda ayuu ugu tegi jirey. Sidaa darteed Rasuulku SCW markuu ka soo laabtay Badar oo uu joogey 9 cisho ayaa wardoonkii Madiina wuxuu u soo gudbiyey in qabiilka la yiraahdo banii Suleym oo ka mid ahaa reer Qadafaan uu u diyaarinayo ciidankiisii sidii uu duullaan ugu soo qaadi lahaa Madiina. Rasuulku SCW markuu maqlay arrinkaas wuxuu kaxaystay ciidan dhan 200 oo nin oo gaadiidkoodii iyo hubkoodii wata, Madiinana wuxuu madax uga dhigay Cabdullaahi ibnu ummi Maktuum.
Rasuulka SCW iyo ciidankiisii waxay gaareen meesha la yiraahdo Kudru oo ay reer banii Suleym degganaayeen. Reer banuu Suleym markii ay maqleen Rasuulka SCW iyo ciidankiisi ayey kala carareen, waxayna toggii ay deganaayeen uga tageen 500 oo geel ah. Rasuulka SCW iyo ciidankiisiii waxay goobtii degganaayeen saddex beri, ka dibna way soo laabteen iyagoo geelii soo kexeystay. Rasuulku SCW wuxuu geelii ka bixiyey khumuskii, afartii boqol ee soo hartayna wuxuu u qaybiyey ciidankiisii oo 200 nin ka koobnaa, sidaas darteed nin walba waxaa ku soo hagaagay 2 neef oo geel ah. Waxaa kale oo Rasuulku SCW soo qafaashay wiil la oran jirey Yasaar, wuuna xoreeyey, ka dibna Rasuulku SCW Madiina ayuu ku soo laabtay.
Daabacad: 2002-12-25 | bog cusub: June 26, 2004